राजमान तामाङको ‘अल्लारे जोवन’ ! • Gazzabko Online
राजमान तामाङको ‘अल्लारे जोवन’ !
यतिबेला चलचित्रको गीत संगीतले अलि धेरै नै मार्केट लिइरहेको अवस्था छ। त्यस माथि अहिले त नेपाली चलचित्र भित्र पनि एल्बमको गीतहरु समावेश गरिन थालिएको छ। यस्तै एउटा सांगीतिक एल्बमको गीत निर्माण हुदै गरेको चलचित्र ‘अल्लारे जोवन’ मा समावेश गरिएको छ । हो दर्शकबिन गायक राजमान तामाङको पहिलो एल्बम ‘उत्सव’ मा समावेश “लौन मलाई रुझायो” बोलको तेस्रो गीत चलचित्र ूअल्लारे जोवनू ले लिएको हो । गायक राजमान तामाङले केहि समय अगाडी मात्र आफ्नो पहिलो एल्बम बिमोचन गरेका थिए । तर त्यसको केहि समयमा नै चलचित्र निर्माण पक्षेले उनको गीत निकै मनपराएर आफ्नो चलचित्रमा राख्नको लागि प्रस्ताव गरे र उनले त्यो स्वीकार पनि गरे । यस्तै उनले आफ्नो गीतलाई चलचित्रमा समावेश गरिदिनुभएकोमा सम्पुर्ण युनिट लगायत संगीतकार बाबुल गिरीलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन् ।
आफ्नो गीत यसरी नेपाली चलचित्रमा रहनु आफ्नो लागि पनि ठुलो कुरा रहेको तर्क गायक राजमान तामाङको रहेको छ । उक्त गीत यति बेला युटुबमा सार्वजनिक भईसकेको छ । गीतमा शब्द , संगीत र अरेन्ज बाबुल गिरीको रहेको छ भने गीतमा स्वर राजमान तामाङ र योजना पुरीको रहेको छ । लोक भाकामा सजिएको गीतको भिडियो पनि निकै राम्रो तयार भएको छ । विश्वास भण्डारीको छायांकन र सम्पादन रहेको भिडियोमा युद्ध लामाको नृत्य निर्देशन रहेको छ । भिडियोमा बाबु सेन्चुरी र बिमता मगरको नृत्य रहेको छ ।
गायक राजमान तामाङको अलिकति चर्चा खोल्ने हो भने उनि नेपाल भन्दा टाढा डेनमार्कमा बसोबास गरिरहेका छन् । कार्य व्यस्तताका बावजुत पनि पनि उनले नेपाली गीत संगीतलाई भने समयको कमि हुन दिएका छैनन् । डेनमार्कमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने कार्यमा समेत उनको उल्लेखनीय भूमिका हुने गरेको छ । त्यहाँ अधिकांश कार्यक्रममा उनको प्रस्तुति हुने गर्दछ । उनको प्रस्तुतिमा त्यहाँ नेपालीहरु निकै खुशी हुदै झुम्ने गर्दछन् । उनले जर्मनी , स्पेन , नेदरल्याण्ड र स्विट्जरल्यान्डमा समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिसकेका छन् । उनको एल्बमको २ वटा गीतहरु पहिला नै सार्वजनिक भईसकेको छ ।
उनले केहि समय अगाडी आफ्नो एल्बमको “पूर्वमा धरान राम्रो” बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिसकेका छन् जसले दर्शक श्रोता माझ राम्रो चर्चा बटुल्यो । त्यस लगतै उनले यति बेला अर्को “हल्का हल्का नजर” बोलको गीतको पनि भिडियो सार्वजनिक गरे । उक्त गीतले यति बेला युटुबमा निकै राम्रो चर्चा कमाईरहेको छ । उनको गायिकीको यति बेला चारैतिर प्रशंसा भईरहेको छ । दर्शक श्रोताले सम्भावना बोकेको युवा पुस्ताको गायकको उपनाम उनलाई दिन थालेका छन् । आफ्नो प्रस्तुतिलाई मनपराई आफुलाई माया अनि साथ प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता प्रति उनले हृदय देखि नै आभार समेत प्रकट गरेका छन् ।
उनले आफ्नो सांगीतिक यात्रालाई अब अगाडी निकै जोडतोडले बढाउने बताए । पहिलो एल्बमको दौरानमा नै आफुले धेरै कुरामा ज्ञान हासिल गरेको र यहि बखतमा बटुलेको अनुभवले पनि आफुलाई धेरै कुरा सिकाएको उनि बताउछन् । दर्शक श्रोताहरुले आफुलाई दिएको माया र सम्मानको सहि रुपले कदर गर्दै अब अगाडी अझै राम्रो प्रस्तुतिको साथमा आउने प्रतिबध्ता उनले जाहेर गरेका छन् । यस्तै उनले आफ्नो प्रस्तुति हेरेर सुनेर त्यहाँ भएका कमि कमजोरीलाई औल्याएर सहि ढंगले मुल्यांकन गरि सल्लहा सुझाबको साथमा अगाडी बढ्नको लागि हौसला समेत प्रदान गरिदिनुहुनको लागि देशमा तथा बिदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दर्शक श्रोताहरुलाई हृदय देखि नै बिनम्र अनुरोध गरेका छन् ।